Qatar oo mamnuucday badeecadaha ay soo saaraan dalalkii go’doomiyay - Ceelhuur Online
Home > Wararka Dibadda > Qatar oo mamnuucday badeecadaha ay soo saaraan dalalkii go’doomiyay
Qatar oo mamnuucday badeecadaha ay soo saaraan dalalkii go’doomiyay
May 27, 2018 admin398
Dowladda Qatar ayaa dalkeeda ka mamnuucday badeecadaha iyo alaabaha ay soo saaraan Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka ee sanad ka hor go’doomiyay.
War ka soo baxay Xukuumadda Doxa ayaa lagu sheegay in badeecadaha ay soo saaraan dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxreyn iyo Masar ee lagu iibiyo dukaamada waa weyn ee dalkaas laga saaro, wixii hadda ka dambeeya ay mamnuuc yihiin.
Sidoo kale Wasiirka Dhaqaalaha Qatar ayaa sheegay in wixii badeecado ah ee afarta dal laga soo dhoofiyo, si dedeg ah looga saaro dalka.
Arrintan ayaa daba socota khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dalalka Khaliijka, kaasoo ka dhashay markii Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka ay xiriirka u jareen Qatar, iyagoo ku eedeeyay inay taageerto Argagixisada.
Qatar ayaa markii cunaqabateynta ay ku soo rogeen Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka, waxaa badeecadaha iyo agabyada kale ee ay u baahan tahay ka soo iibsataa dalalka Turkiga iyo Iiraan oo ay xiriir dhow la leedahay.
Maxay tahay sababta dowladda Turkiga ay Soomaaliya howlgalka uga waddaa?
SALKA KHILAAFKA GALMUDUG W/Q: Ilyaas M. Xuseen
C/raxmaan C/Shakuur : Alshabaab ayaa si dadban ula wareegay talada dalka (Daawo)
2 Nin oo lagu dilay deegaanka Qeydaro gobolka Mudug
Eritrea oo Taageertay Qatar
June 9, 2017 November 23, 2017 Cali Yare